Ku dhowaad 5 Carur ah oo Cudurka Shubanka ugu geeriyooday Garoowe – SBC
Ku dhowaad 5 Carur ah oo Cudurka Shubanka ugu geeriyooday Garoowe
Posted by editor on Juun 13, 2011 Comments
Ugu yaraan 5 caruur ah ayaa ugu geeriyootay Isbitalka Magaalada Garoowe xarunta Puntland Cudurka Shuban Biyoodka iyo Jadeecdada oo soo ritay, kuwaas oo badankood laga keenay dhulka miyiga ah .
Xafiiska SBC ee Magaalada Garoowe oo arintani u kuur galay ayaa isbitalka weyn ee magaaladaas waxaan kula kulanay Dr Maxamed Xasan Carabey, waxaana uu sheegay isagoo ka warbixinaya inta la keenay Isbitalka ee caruur ah islamarkaana uu soo ritay cudurkan iyo inta u geeriyootay sida,
Waxa uu sheegay Diktoorku in ilaa iyo hada ay xaqiijinayaan in ay geeriyoodeen ku dad gaaraya 5 Qof oo Caruur ah islamarkaana 2 ka mid ah laga keenay Baadiyaha halka 3da kalena gudaha magaalada Garoowe.
Waxa uu intaasi ku daray Dr Maxamed Xasan Carabey ahna madaxa isbitalka in dhimashada caruurtaasi ay timid ka dib markii uu si aad ah u soo ritay cudurkan shubanka islamarkaana ay nafaqo la’aan darted u dhinteen.
Waxa uu ugula dardaarmay waalidiinta dhalay ilmaha yar yar ee uu haleelo cudurkan in aysan la sugin heerka sadaxaad ee cudurka taas oo ku keeni karta in waxlaga qabanwaayo ayna sida ugu dhaqsiyaha badan la soo gaaraan goobaha caafimaad.
Isbitalka waxa uu manta ahaa mid aad u mashquul ah islamarkaana ay ku sugnaayeen caruur badan oo laga kala keenay magaalada garoowe gudaheeda iyo deegaanada baadiyaha ah, waxayna dhamaantood u muuqdeen kuwo isku wada xanuun ah.
Sikastaba ha ahaatee ciligan oo uu cudurkan shubanka ah ka bilowday gobolka ayaa ah xili ay de’een roobabkii guga oo ay dhici karto in nadaafad dari ay ka dhalato deegaanada ay caruurtu ku dhaqanyihiin.